SAWIRO-Kulan looga hadlaayey Sidii xal looga gaari lahaa Barakacyasha oo ka Dhacey Degmada Baydhabo. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta SAWIRO-Kulan looga hadlaayey Sidii xal looga gaari lahaa Barakacyasha oo ka Dhacey...
Baydhabo (Halqaran.com)-Gudomiye ku xigeenka Degmada Baydhabo Dhinac maamulka Iyo Maaliyada oo manta Ku Dahfurey Kulan looga hadlaayey Sidii hal waarta looga gaari lahaa Baracayaasha Ku nool Degmada Baydhabo.
Kulan oo isugu yimaadeen Maamulka Degmada baydhabo Heyadaha Ka shaqeeyga arimaha bani aadanimada Iyo gudomiyaha barakacaysha iyo gaxootiga Koonfur galbeed
waxaana looga hadlaayey Sidii Hal waarta looga gaari lahaa dhibaatooyin Ka soo noqnoqdey Deegaanada Koonfur galbeed gaar ahaan Magaaladda Baydhabo.
Cabduqadir cali watiin gudomiyaha barakacaysha iyo gaxootiga Koonfur galbeed ayaa uga horeyntii Sharaxey Kulanka ay la qaateen Hay’adaha Samafalka ah ee ka howlgala Koonfur galbeed Somaliya.
Gadomiye ku xigeenka maamulka Iyo Maaliyada Degmada Baydhabo Dr Yusuf bare ayaa waxaa uu ka hadley Sida uga dhow ee xal waara looga gaari lahaa dhibaatooyinka barakacyaasha Asagoona Hay’adaha Ka shaqeeya Degmada Baydhabo kula dardaaramey in ay Sida uga dhaxsiyaha badan ay ubilaabaan Xalkugaarista Barkacyaasha Degmada. Xafiiska Wararka(Halqaran.com)